Tag: Mupepeti | Martech Zone
Maitiro Ekubatanidza Yako B2B Zvemukati Kugadzira Zvinotungamira neNetLine Portal
Muvhuro, Nyamavhuvhu 21, 2017 Chipiri, August 22, 2017 Douglas Karr
NetLinePortal ndeye yemahara B2B inotungamira chizvarwa chikuva apo maajensi anogona kugadzira yemukati syndication mushandirapamwe wekutyaira kuziva kana kutora zvinotungamira. Iyo sisitimu inopa maviri akasiyana zvipo: LeadFlow yekugadzira zvinotungamira, zvichikubvumidza iwe kubatanidza zvemukati, kushandisa lead mafirita uye kurovera, kumhanya account-yakavakirwa kushambadzira, wedzera tsika mibvunzo, gadza yako bhajeti uye chirongwa, yekuwana mushandirapamwe mishumo, uye gamuchira mhando inotungamira. Kutungamira kunotanga pamadhora mapfumbamwe pakutungamira. ZvemukatiFlow kutyaira brand kuziva nekubatanidza zvirimo uye nekuwana mushandirapamwe
Nyika yeSEO iri kuzunza zvishoma panhau dzekuti Moz iri kucheka vashandi vayo muhafu. Ivo vanotaura kuti ivo vari kupetwa pasi pasi neyakagadziridzwa yekutarisa pakutsvaga. Ivo vanga vari piyona uye akakosha mudiwa mune iyo SEO indasitiri kwemakore ikozvino. Maonero angu haana tarisiro kuOrganic Kutsvaga indasitiri, uye handina chokwadi kuti ndipo panofanira kuzadzikiswa pasi neMoz. Ipo Google ichiramba ichivaka mhedzisiro uye nemhedzisiro yemhando kuburikidza nehungwaru hwekunyepedzera
Vatengesi vagara vachitsvaga kusvika kune vatengi vavo panguva chaiyo chaiyo - uye kuti vazviite pamberi pemakwikwi avo. Nekuuya kweInternet uye chaiyo-nguva analytics, iyo nguva yekuve yakakodzera kune vatengi vako iri kudzikira. Big Data ikozvino yave kuita kushambadzira kunyange nekukurumidza, kunoteerera, uye kuwanda kwehukama kupfuura nakare kose. Huwandu hweruzivo uye nesimba remakomputa kubva mugore, iro riri kuwedzera kuwanika uye risingadhuri, zvinoreva izvozvo
Svondo, Kurume 8, 2015 Mugovera, Chivabvu 7, 2016 Douglas Karr
Tichazonyora zvakawanda pamusoro pechiremera chemukati, asi tinoda kuunza zano rekuti agency yedu yanga ichiendesa nerubatsiro rwevamwe vedu kuMetonymy Media uye Dittoe PR. Mamiriro ekumashure pane Zvemukati Chiremera Dambudziko ratiri kuramba tichiwana nevatengi vedu nderekuti panogara paita kunge paine kushomeka kwemazano sezvo ivo vari kuendesa yavo yemukati kushambadzira. Altimeter inoshuma kuti 70% yevatengesi vanoshaya akafanana kana